Archive du 20161222
Fanapoizinana an�i Anth�lme Ramparany Olona 3 no voasambotra
Efa nivoaka ny hopitaly ny depioten�i Mananjary Anthelme Ramparany taorian�ny fanapoizinana azy tamin�ny alalan�ny zava-pisotro tany Fianarantsoa ny alahady lasa teo, ka tsy maintsy nakarina taty an-drenivohitra izy.
Kolikolin�i Claudine A&C Hisy raharaha eto amin�ny 2017
Mitombina tokoa ve fa mena ambanin�ny mena ny Bianco sy ny fitsarana fa ny ao an-dapa ihany no tompon�ny teny farany ?
Fifidianana filoham-pokontany Mbola nanaovana atrikasa
Na dia efa lojika aza ny fanazavana nifanesisesy tamin�ireo haino aman-jery miampy ireo fanehoan-kevitry ny olom-pirenena heno tetsy sy teroa fa rariny raha fidiana amin�ny alalan�ny latsa-bato
Iles �parses Ambenana lezionera Malagasy 11
Miisa 11 ankehitriny ireo lezionera Malagasy ampiambenan�ny Frantsay ireo nosy manodidina (�les �parses) antsika.
Vaovao Benjamin Mila tairina ny fitsarana
Manoloana ny fisamborana mpanao politika etsy sy eroa, toy izay nahazo ny filoha lefitry ny vondrona Mapar, Augustin
Antoko PSD Handray ny andraikiny
Nosantarina tao Mahajanga ny sabotsy 17 desambra teo ny fankalazana ny tsingerintaona faha-60 niorenan�ny antoko PSD (Parti Social-D�mocrate) na koa Pisodia araka ny ahafantaran�ny maro azy.
Taratasin�i Jean Dadabe Noely hafakely
Miarahaba anao ry Jean ! Hafakely mihitsy ny fankalazanao ny noely tamin�ity indray maka ity a ! Ny an�ny dadabe Noely hafa mba vatomamy sy bisikoitra no zaraina miaraka amin�ny kilalao rehefa ankatoky ny fety toy izao fa tsy zavatra hafa toy ny anao.
Andekaleka ritra Roa taona lasa no efa fantatra
Mifototra amin�ny fampiasana fitaovana termika ny � ny loharanom-pamokarana herinaratra eto Madagasikara. Lany amin�ny fividianana gazoala avokoa noho izany ny 75%-n�ny tohana ara-bola 300 miliara ariary isan-taona avy amin�ny fanjakana foibe.
Televiziona Malagasy Naverina avokoa ireo mpitantana teo aloha
Nifanesy ny fanendrena tompon�andraikitra eo anivon�ny haino aman-jerim-panjakana tato anatin�ny iray volana izao.
Mpitandro ny filaminana Malagasy Afa-baraka tanteraka
Hifandovana toy ny fahefana ihany ny leson-dratsin�ny mpitondra firenena eto amintsika. Tompondaka tamin�ny fisamborana sy fampiasana ny herim-pamoretana ary ny fanagadrana ny fitondrana tetezamita ary mandova izany ny fitondrana Rajaonarimampianina.
Ady amin�ny aretina Sida Manentana sy manampy ny tanora ny Airtel
Manampy sy manentana ny olon-drehetra amin�ny ady amin�ny aretina SIDA ny Airtel, indrindra fa ny tanora
Lyc�e Moderne Ampefiloha Nahazo tranomboky raitra
Afaka amin�ny fahanteran�ny tranomboky sy ireo karazam-pitaovana ilaina ao anatiny ireo mpianatry ny Lyc�e Moderne Ampefiloha miisa 2.000. Nahazo tranomboky vaovao manara-penitra izy ireo, fotodrafitrasa vao notokanana omaly.
Pasitera Mailhol Notoloran�ny fanjakana mariboninahitra
Notolorana ny mariboninahitra � Commandeur de l�ordre national Malagasy� tetsy amin�ny lapan�ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina i Pasitera Mailhol na Andr� Christian Dieu Donn� omaly.
Mandady ny trambo !
Tsy sanatria maniry ny hisian�ny korontana eto amin�ny firenena na koa maniry loza ho an�ny fitondrana, fa tonga amin�ilay fitenenana hoe mandady ny trambo ny zava-misy amin�izao fotoana izao.